संचारकर्मी रमा विष्ट
मकवानपुर गोगने स्थायी बसोबास भएकी रमा विष्ट मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । सञ्चारक्षेत्रबारे जिज्ञासु उनी रेडियो निकासमा केही समयदेखि कार्यरत छिन् । समाचार वाचनका साथै प्राविधिक रुपमा अनुभव लिन थालेकी उनीसंग जीवनभोगाईबारे संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौं ।
१. तपाईंको नाम रमा, नामको अर्थ ?
– खासै थाहा छैन । तर बुबा आमा अनि अरु दादा, दिदीको नाम राख्नुभएको अनुसार सायद मेरो नाम राखिएका हुनुपर्छ । मेरो नाम पनि कुनै भगवानको नामसंग मिल्छ भन्ने मैले हिन्दु धर्मशास्त्रमा सुनेको छु । तर यो अर्थ अञ्जान भएपनि मलाई मेरो नाम मन पर्छ । जतिसुकै दुःखमा भएपनि मलाई मेरो नाम उच्चारण गर्दा त्यो दुःखलाई भुलेर रमाउनलाई भनिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ ।
२. आजभोली के मा व्यस्त तपाई ?
– यहि त हो, रेडियो पनि परीक्षा आउँदैछ यसैको तयारी ।
३. मिडीयामा कसरी आउनुभयो ? यसक्षेत्रमा रुचीचाँही कत्तिको छ ?
–हजुर, म मिडीयामा आबद्ध भएको छु । यहि पेशामा केही गर्ने सोच छ र यसमा रहरुचले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । किनकी रहर वा रुचीको कुरामा नै बढी झुकाव हुन्छ र सफलता पनि ।
४. भविष्यमा के बन्ने सोच छ ?
– जीवनमा जे राम्रो देखियो, मलाई पनि त्यस्तै बन्न पाए हुने जस्तो फिल हुन्छ । तर जीवनमा सोचेको तथा लिएको सबै उद्घेश्य पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले गर्दै जाँदा जुन कुरामा सफलता पाउँनेछु । सायद त्यसलाई नै जीवनको उद्घेश्य मान्नेछु र सन्तुष्ट पनि हुनेछु ।
५. सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ?
– म मेरी आमाको मायामा विलीन छु ।
६. भूल्नै नसकिने त्यस्ता केही क्षण छन् ?
– जीवनमा धेरै क्षणहरु छन् जुन भूल्न सकेकी छैन र भूल्न हुदैन पनि । यहि छन् ति मध्ये यस्ता छन् कि जुनलाई म कहिल्यै पनि भूल्न सक्दिन । म धेरै डरपोक मान्छे हुँ । त्यतिबेला सानै थिए । मेरी आमा धेरै विरामी हुनुहुन्थ्यो । साउन महिना थियो, आमाको औषधी पनि त्यही बेला सकियो । नजिकै औषधी नपाएपछि म रुदैं साउने झरीमा बाटोमा एक्लै गोडामा चप्पल पनि नलगाईं आमाको लागि औषधी लिएर आएको थिए । यो क्षण भुल्न त सक्दिन नै साथै जीवनमा डरभन्दा पीडा साह्रै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझेकी छु ।
७. कसैसंग प्रेममा हुनुहुन्छ ?
– हाहा छैन ।
८. तपाईंको बुझाईमा प्रेम के हो ?
– प्रेम जीवन जीउने शुत्र हो । प्रेममा छलकपट र कुनै स्वार्थ हुदैन । यहि कुनै प्रेममा यो सब हुन्छ भने त्यो कहिल्यै प्रेम हुँदैन ।
९.कहिल्यै रुनु भएको छ ?
– आँशु भनेको जीवनको कमजोरी नै हो । धेरै पटक रोएकी छु । तर जुन अवस्थामा म रोए, त्यो अवस्था फेरी आउनसक्ला र फेरी रुनु पर्ला । तर मेरो एउटा यस्तो रुवाई थियो, जुन रुवाईको अवस्था फेरी कहिल्यै फर्केर आउँदैन त्यो दिन थियो मेरो बुबाले संसार छाड्नुभएको दिन ।
१०. तपाइको अहिलेसम्मको जीवन भोगाईको छोटोमिठो कुराकानी गर्न पाइयो धन्यवाद ।